ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने तपाइले सोचेको काम बन्नेछ ॐ लेखि सेयर गरौं ! – Complete Nepali News Portal
ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने तपाइले सोचेको काम बन्नेछ ॐ लेखि सेयर गरौं !
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो। ॐॐॐॐ
यो पनि पढ्नुस ।
भिडियो हेर्नुहोस सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिं’ग ?शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो ।
स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ ।र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।भिडियो हेर्नुहोस। त्यसैले शिवलिं’गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ,।
त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिं’ग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो । जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि ।ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो । यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिं’गमा निहित हुन्छ ।
वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग काे पूजा गरीन्छ ।शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ भिडियो हेर्नुहोस।
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो। ॐॐॐॐयो पनि पढ्नुस । परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन ।
अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।भिडियो हेर्नुहोस सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
आखिर के हो त शिवलिं’ग ?शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ ।र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।भिडियो हेर्नुहोस।
त्यसैले शिवलिं’गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ,। त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिं’ग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो । जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि ।ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ ।
हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो । यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिं’गमा निहित हुन्छ ।
वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग काे पूजा गरीन्छ ।शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ ।